हाम्रो साथी भोकै छ सरकार किन ढुक्कै छ ? - खबरम्यागजिन
Homeखबरहाम्रो साथी भोकै छ सरकार किन ढुक्कै छ ?
September 5, 2021 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि खबर, सिक्किम 0
गान्तोक,5सेप्टेम्बर। सिक्किमको अस्थायी शिक्षकहरूको पाँच दिनदेखि चलिरहेको आन्दोलनलाई सिक्किमे नागरिक समाजले समर्थन जनाउँदै सरकारले झट्टै यसको समाधान गर्नुपर्ने माग गरेको छ। पूर्व जिल्लाको जिल्ला प्रशासन केन्द्र परिसरमा गत पाँच दिनदेखि आफ्नो माग लिएर आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूले आज सड़कमै शिक्षक दिवस पालन गरे। उनीहरूले आफूहरूलाई सडकमै पनि विद्यार्थी र अविभावकहरूले उत्तिकै सम्मान र इज्जत दिएर शिक्षक दिवसको शुभकामना दिन आएको भन्दै सबै भावुक बनेको बताए। आन्दोलनरत शिक्षकहरूमा चारजनाले आमरण भोक हड्ताल गरिरहेका छन् भने आज एकजना थप शिक्षकले भोक हड्तालमा सामेल हुने घोषणा गरे। यसैगरि आज दिनभरि भेलाभएका सबै आन्दोलनरत शिक्षकहरूले पनि भोक हड्ताल बसेको आफ्नो सहयोद्धाहरूको समर्थनमा एकदिने भोक हड्ताल बसेर ऐक्यबद्धता जाहेर गरे। उनीहरूले सड़कमा डॉ. सर्वपल्ली राधा कृष्णनको तस्वीरमा माल्यापर्ण गरेर केक काटेर शिक्षक दिवस पालन गरे भने विद्यार्थीहरूलाई आज यहाँ आएर शिक्षकहरूलाई सम्मान गर्नका साथै शिक्षक दिवसको शुभकामना दिएका थिए। आन्दोलनमा भोक हड्ताल बसिरहेका शिक्षकहरूलाई उनका साथीहरूले खादा लगाए सम्मान पनि जनाएका थिए।
अर्कोतिर सिक्किमे नगरिक समाजका प्रतिनिधिहरू अपराह्नमा आन्दोलन स्थलमा पुगेर आफ्नो पक्षबाट आन्दोलनमा पूर्ण समर्थन रहेको प्रतिश्रुति दिए। यस अवसरमा नागरिक समाजका प्रमुख संरक्षक छितेन टासी भोटिया, अध्यक्ष भरत बस्नेत, पूर्व शिक्षा मन्त्री केएन उप्रेती, पूर्व मुख्यु सचिव पीके प्रधान, महासचिव पासाङ ग्याली शेर्पा, संयोजक सोनाम शेर्पा लगायत समाजका प्रतिनिधिहरूले भोक हड्तालमा बसेका आन्दोलनकारीहरूलाई खादा लगाएर सम्मान जनाए। समाजका अध्यक्ष भरत बस्नेतले राज्य सरकारले अहिले शिक्षकहरूलाई लिएर गरेको व्यावहार दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए। उनले सरकार र विभागका सचिवले शिक्षकहरूको कुरा नसुनेको बताउँदै विभागका प्रमुख अतिरिक्त मुख्य सचिव जीपी उपाध्यायले पूर्व सरकारमा पनि शिक्षकहरूलाई अऩ्याय गरेको र अहिले पनि त्यसै गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनको कार्यकालमा अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान भएन न त विद्यार्थीहरूको समस्या समाधान भएन भनि दाबी गरे। उनले भने यो परिवर्तनको सरकारमा कि सचिवले काम ठीक गरेको छैन कि सरकारले काम ठीक गरेको छैन।
यस अवसरमा पूर्व मुख्य सचिव पीके प्रधान, प्रमुख संरक्षक छितेन टासी भोटिया, पूर्व मन्त्री केएन उप्रेतीले पनि सम्बोधन गरेका थिए।
शिक्षकहरूको आन्दोलनमा भोक हड्ताल बसेकाहरूको स्वास्थ्य खराब भइरहेको अनि सरकारले भने अहिलेसम्म केही नसुनेको आन्दोलनकारीहरूले आरोप लगाएका छऩ्। “हाम्रो साथी भोकै छ सरकार किन ढुक्कै छ ?” भन्ने नारा लगाउँदै आन्दोलन चर्काइरहेका अस्थायी शिक्षकहरूको अवस्था बुझ्न स्वास्थ्य विभागबाट पनि नआएको उनीहरूले आरोप लगाए। आज बिहानसम्म पनि भोक हड्तालमा बस्नेहरूको स्वास्थ्य जाँचको निम्ति कोही नआएको अनि प्रेसर नाप्ने काम पनि शिक्षकहरू आफैले गर्न बाध्य भएको बताउँदै केही तलमाथि भएको खण्डमा सम्बन्धिक निकाय पूर्ण जिम्मेवार रहने छ भनि बताएका छन्।